प्रधानमन्त्री ओलीको सुरक्षाका लागि प्रहरीले ५ करोडको सुरक्षा उपकरण किन्दै – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/प्रधानमन्त्री ओलीको सुरक्षाका लागि प्रहरीले ५ करोडको सुरक्षा उपकरण किन्दै
काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले सर्भिलेन्स गाडीसहितको एलटिई र्‍यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाल प्रहरीको बजेटबाट प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि सर्भिलेन्स गाडीसहितको उपकरण खरिद गर्न लागिएको हो ।
प्रहरीलाई तत्काल आवश्यक नभएको सो उपकरण खरिदमा प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली आफैंले चासो दिएर चाँडै खरिद गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
कोरोना कहरबीच प्रहरी जनशक्ति सुरक्षा उपकरणबिनै फिल्डमा खटिरहेको अवस्थामा ५ करोड खर्चेर उपकरण खरिद गर्न चिनियाँ कम्पनी हुवावेको नेपाल प्रतिनिधि हनी इन्टरप्राइजेज र मोबिलिटी प्रालिलाई छनोट गरिएको छ । सो उपकरणले प्रधानमन्त्रीको सवारीका बेला सर्भिलेन्स गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमण भए वा अन्य विपत्ति आइलागे सुरक्षा निकायलाई तुरुन्तै भिडियो रिपोर्ट दिने भएकाले प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको सल्लाहमा उपकरण खरिद अन्तिम चरणमान पु¥याइएको हो । त्यसका लागि नेपाल प्रहरीको सूचना तथा प्रविधि निर्देशनालयले फागुन १९ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
साथी जीवनको बिहेमा भत्केरू बने रमेश प्रसाई ; अति रमाइलो ठट्टा गर्दै (भिडियो हेर्नुस्)
एकाबिहानै म्याग्दीबाट आयो यस्तो दु:खद खबर ! गाउँलेको भा’गाभा’ग भयो !
बो’क्सी भन्दै छोराले नै कु’टपि’ट गरेपछि आमाको मृ’त्यु
गौरादह अनौठो घटना ! श्रीमान घर आउँदा श्रीमतीको श व खाट मुनी फेला, लैलाले गर्दैछ अनुसन्धान (भिडियो हेर्नुस्)